Inta badan Bike Friendly Cities In Europe Oo Sida loo Waxaa Hel | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Inta badan Bike Friendly Cities In Europe Oo Sida loo Waxaa Hel
Haddii aad muddo dheer si aad u aragto qaar ka mid ah Europe ee waa-booqo dalal, dhowr ka mid ah baaskiil magaalooyinka saaxiibtinimo ugu Hubaal waa inaad liiska ka dhigi doonaa. Magaalooyinkaas weyn si ay u sahamiyaan by baaskiil yihiin, iyaga ugu fiican ee safarka on miisaaniyad. Oo waa inaad halkaas ka heli kartaa tareen. Halkan waxa ku jira toban baaskiil magaalooyinka ugu saaxiibtinimo ee Europe:
Amsterdam ayaa waxay si joogto dhex baaskiil magaalooyinka ugu saaxiibtinimo ee Europe. Waxa uu kala soocay kuwan raadkaygay wareegga halkii surimmada, oggolaadaan in aad meel walba tagaan baabuur-free. si fudud aad u gaarto karo by tareenka ka Paris, Brussels, Copenhagen iyo dalal kale oo weyn oo Yurub ah.
Copenhagen maal in ka badan 134 € million galay horumarinta ay network baaskiil sanadihii la soo dhaafay. In ka qayb qaatay samaynta ay network waddada wareegga cajiib ah oo bilaabay inuu ka mid Copenhagen cagaaran noqon meelaha Yurub.
Berlin ayaa ku hawshooday si ay u noqdaan mid ka mid ah magaalooyinka baaskiil saaxiibtinimo ugu badan ee Europe muddo ah. Waxay ugu dambayntii u sameeyey, in olole baahsan ee bulshada baaskiil mahad. Sida mid ka mid ah xarumaha gaadiidka tareenka Yurub, Berlin waa arrin fududahay si aad u hesho si ay u.
Cities ee Netherlands jecel baaskiilada ay. Utrecht fara badan galiyaa galay ay baaskiilka kaabayaasha. jidadka baaskiilka Long iyo goobaha baabuurta la dhigto weyn mid si fudud loo isticmaali waxaa baaskiilada.
Brussels si Tareenadu Utrecht
Antwerp in Tareenadu Utrecht
Berlin si Tareenadu Utrecht
Paris si ay Tareenadu Utrecht
Antwerp waa baaskiil magaalada ugu saaxiibtinimo Belgium ee, la horumariyo network jidadka baaskiil. Iyada oo mashaariic badan oo loogu talagalay in lagu sii wanaajinta, Sida xaqiiqada ah Antwerp ka mid ah dalal baaskiil ugu sareysa Europe sii joogi doono.
Vienna faantaa hirgelinta Europe ugu horeysay ee baaskiil xamuul nidaamka kirada. dadaallada kale ee magaalada si deeqsinimo leh maalgaliyo si ay u sameeyaan Vienna ka mid dheeraad ah oo baaskiil-saaxiibtinimo la dhiso ee 1300-km of network jidadka baaskiilka.
Basel ayaa caan ku ah dhawr waxyaalood, iyo in ay baaskiil-friendly waa mid ka mid ah. In cimilada ama xilli, waxaad ka arki kartaa dadka degan Basel isticmaalayo baaskiil si ay u maraan agagaarka si fudud. Waxaad gaari karo Basel ka Amsterdam oo tareen si toos ah.
8. Engadin, Germany
Ka mid ah Germany ayaa magaalooyinka saaxiibtinimo baaskiil ugu, Engadin xajiya darajayn ah oo si joogto ah u wanaagsan. Magaaladu waxay si adag uga shaqaynaysaa si loo hubiyo in baaskiil ku faraxsan yahay kaabayaasha ay baaskiilka iyo ammaanka yihiin.
Essen in Tareenadu Engadin
Bielefeld in Tareenadu Engadin
Cologne si Tareenadu Engadin
Hanover in Tareenadu Engadin
magaalooyinka Talyaani sida caadiga ah ma ka mid yihiin kuwa baaskiil magaalooyinka ugu saaxiibtinimo ee Europe, laakiin Verona u taagan si fiican. Waa magaalo weyn oo ay ku sahamiyaan by baaskiil, iyo tareenku ka Rome si Verona oo kaliya ku darayaa in quruxda aad safarka.
Rimini in Tareenadu Verona
Rome si ay Tareenadu Verona
Florence si Tareenadu Verona
Venice in Tareenadu Verona
Munich leedahay qorshe cad si ay u dhisaan badan zone network baaskiilka iyo kor ugu qaaddo kaabayaasha baaskiil ah. Himilada kama danbaysta ahi waa in ay gaaraan 30% modal share for baaskiilada. Haddii aad rabto in aad tijaabiso helitaanka agagaarka Munich on baaskiil, aad waxaa u safri karaan tareenka ka Berlin, Vienna, iyo Zurich, ka mid ah magaalooyinka kale.
aad diyaar u tahay inay bixiso booqasho in ay qaar ka mid ah iyadaa ugu fiican Yurub adiga oo isticmaaleya isticmaale baaskiilka iyo tareen kaliya waa? Hel diyaar u quudhin ee Meyeydaan, iyo jartaan tikidhka tareenka aad hore!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-bike-friendly-cities/ - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#Bike-Friendly #baaskiilada Bike bikefriendly europetravel tareen safarka